Maalin kamid ah Maalmaha Murugta leh oo ay Soomaali soo martay // Qaraxii Xalay | KEYDMEDIA ONLINE
Maalin kamid ah Maalmaha Murugta leh oo ay Soomaali soo martay // Qaraxii Xalay
Muqdisho (KON) - Ugu yaraan 10 Ruux ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 18 kalena waa dhaawac, Dadkii ku Nafwaayeen Weerarka waxaa kamid ah sii Hayaha Safaarada Soomaaliya ee UK Cabdulkadir “Dhuub”, Maantay waxey ku jirtaa Maalmaha Murugta leh oo ay Soomaali soo martay.
Keydmedia Online ayaa isla Daqiiqadii soo Qortay in Hotel Makka Al- Mukarama la weeraray, Waqtigaas Qarax ma dhicin ee waxaa la shaaciyay in la qabtay Nin laga shakiyay. Shan Daqiiqo kama soo wareegin, Qarax Xooggan oo Dariiqo dhan laga maqlay ayaa ka dhacay Afaafka hore ee Hotelka.
Wariye Daqiiqado kadib tagay Goobta ayaa noo sheegay in Ciidamada ay fureen Rasaas kadib markii uu Ninka damcay in uu Cararo, waxaana Rasaastaas ku dhawacmeen Labo ruux oo rayid ah, Isla markaasnah waxaa la maqlay Qarax Xooggan.
Afhayeenka Hay'adda Ammaanka ayaa Faah-faahin ka bixiyay sidee wax u dhaceen, wuxuuna Idaacadda Dowladda u sheegay in Nin laga shakiyay uu soo galay Hotelka isaga oo wata Laptop, wuxuu tagay ilaa Goobta lagu shaaxeeyo ee Hotelka, markuu Laptopka iska dhigay ayuu Qarxay Laptopka.
Jeceraal Madaale ayaa sheegay in dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ay gacanta ku dhigeen Ninka, ka dibna Ciidamada Ammaanka ay goobta gaareen, iyadoo lagu guuleeystay in la aqoonsado waxyabihii ka dhex dhacay Lap-topka oo ahaa Qarax dhab oo uu ugu tala galay in uu ku laayo Dad maqaayada hoteelka fadhiyay.
Daqiiqado kadib waxaa Afaafka hore ee Hotelka ka dhacay Qarax kale oo xoggan, kaasoo gilgilay dhulka, waxaana Afaafka hore ee Hotelka ku sugnaa Dad badan.
"Intaan baareynay Waxyaabaha uu watay Ninka soo galay Hotelka, Weydiineynanah Su'aallo ayaa Qarax kale oo loo adeegsaday Baabuur uu ka dhacay Banaanka Hotelka" Ayuu yiri Afhayeenka Hay'adda Ammaanka, Jen. Maxamed Yuusuf Cumar.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee DF C/kariin Guuleed ayaa Labo Saac kadib xaqiijiyay in 5 Qof ay ku dhimatay Weerarka, 15 kalena ay ku dhaawacmeen, wuxuuna sheegay, maxaa kaloo laga sugayay, in Weerarka ay ka danbeysay Kooxda Shabaab "Qoladii u taagneed daadinta dhiiga Shacabka ayaa ka dambeesay Weerarkaan".
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa si kulul u cambaareeyay Qaraxyadan: “Waan cambaareynayaa weerarradan fulaynimada ah, waxaana ehelladii ay dadkoodii aan waxba galabsan waxyeelladu kasoo gaartay tacsi ayaan u dirayaa. Cadowga nabaddu waxay lasoo baxeen midabkoodii ay kaga soo horjeedeen nabadda,” ayuu yiri Ra’iisul wasaaruhu.
Khasaarihii ka dhashay Labadaas Qarax ayaa kordhay, waxaana tirade dhimashadu la sheegay inay gaartay 11-Qof, halka 18 Qof ay ku dhaawacmeen, sida ay baahisay Wakaaladda Wararka AFP.
Dadka ku nafwaayay Qaraxa ayaa waxaa kamid ahaa sii Hayaha Safaarada Soomaaliya ee UK, Marxuum Cabdulqaadir Aadan "Dhuub".
Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay Mas’uuliyadda Weerarka hase ahaatee waxaa Cad in ay Maantay ku jirtay Maalmaha Murugta leh oo ay Soomaali soo martay.